कोटेश्वरतर्फबाट ओर्लिनुपर्ने विमान किन लाग्यो पशुपति ? - Khabarsansar.com
काठमाडौं २८ फागुन, । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा मात्रै धावनमार्ग (रनवे) छ । सो रनवेका दुईवटा ‘हेडिङ’ अर्थात मुखहरु छन् । संसारभरिका जुनसुकै एयरपोर्टमा पनि एउटा रनवेका दुईवटा ‘हेडिङ’ हुन्छन् । र, दुबै हेडिङबाट विमान उडान वा अवतरण गर्न सकिन्छ । यसअर्थमा नेपालको विमानस्थलमा पनि दुबैतिरबाट अवतरण गर्न पाइन्छ, एउटा मात्रै मुखबाट अवतरण हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
तर, विदेशबाट आउने जहाजहरु प्रायः कोटेश्वरतिरको ०२ हेडिङबाटै अवतरण हुनुका पछाडि दुईवटा कारण छन् । पहिलो, विमानले घुमिरहनुपर्दैन । र, दोस्रो ०२ हेडिङ रातिका लागि पनि सहज छ । किनभने ०२ हेडिङका लागि ‘इन्टु्रमेन्ट एप्रोच’ जडान गरिएको छ । पशुपतिनाथतिरको २० हेडिङबाट अवतरण गर्दा भने त्यहाँ इन्ट्रुमेन्ट एप्रोच छैन ।
युएस बंगला विमानबारे एकजना अनुभवी नेपाली पाइलट अनलाइनखबरसँग भन्छन्- ‘एयर ट्राफिक कन्ट्रोल रुम र चालकसँगको सम्वादमा चालकले ०२ बाट ट्राफिक जाम भएको अवस्थामा पशुपति क्षेत्रतर्फको रनवे २० हेडिङबाट अवतरण गर्न अनुमति मागेको सुनिन्छ । र, त्यहाँबाटै भए पनि अवतरण गर्न पाइने अनुमतिसमेत दिइएको समेत सुनिएको छ । त्यसरी अनुमति पाएको अवस्थामा ०२ वा २० जहाँबाट पनि अवतरण गर्दा पनि फरक पर्दैनथ्यो ।’
दुर्घटनाको रहस्य अब ‘ब्ल्याक बक्स’लाई जिम्मा
दुर्घटनापछि सार्वजनिक भएको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल रुप र विमान चालकवीचको सम्वादले रनवे ०२ र २० का बारेमा केही खुलासा अवश्यै गरेको छ । तर, पशुपति क्षेत्रतर्फको २० हेडिङ प्रयोग गर्न दिइएको निर्देशनअनुसारै सही, बंगला विमान किन सकुशल अवतरण हुन सकेन ? यसका लागिचाहिँ सो विमानभित्रै रहेका चालकवीच आपसमा भएको सम्वाद नै सुन्नुपर्ने हुन्छ ।